Dabaqyo, tareeno iyo jidad: Addis Ababa oo u ekaatay magaalo Shiine (sawirro) – Radio Daljir
Dabaqyo, tareeno iyo jidad: Addis Ababa oo u ekaatay magaalo Shiine (sawirro)
Seteembar 7, 2018 6:50 g 0
*** Maqaalkan waxaan ka soo koobnay maqaal CNN, kuna qornaa afka Ingiriiska ***
Wen Wang oo ah hormariye dhisa dhismayaas waaweyn ee qaaliga ah, safka horena uga jira maalgashadayaasha Shineeska ee mashaariicda waaweyn ka wada Addis Ababa, Itoobiya, ayaa markii uu dhammeeyey dhisme dabaq ah oo weyn waxaa ku dhacay filanwaa uusan hore u arag. Dadkii gadanayey qolalka dhismaha dabaqa waxa ay boobeen dabaqyada hoose, ayaga oo aan danba ka lahayn dabaqyada sare ee leh fiirada indhaha-u-roon. Laakiin Wang oo casharkii bartay baa waxa uu yiri, “haddii korontadu tagto taas macnaheedu waxaa weeye wiishka ama dad-qaadaha dabaqu (elevator) shaqayn mayo. Sidaas darteed dabaqyada hoose waa kuwa Addis Ababa ugu qaalisan.” Wang oo hadalkiisa ii wata baa waxa uu ku daray, “ogoow qiimeynta noocaas ahi suurtagal kama aha magaalooyinka Shiinaha.”
Saas oo ay tahayna, Addis Ababa fursan mayso in sida Shiinaha oo kale ay yeelato dabaqyo dhaadheer, maxaa yeelay Addis Ababa wax ku meegaarsan dhul beereed sharciyeysan oo aan la taaban karin, lama huraana ka dhigaya dhisidda dabaqyo dhaadheer, sida midkan $60ka milyan ee dhismaha Poli Lotus ee shirkadda Tsehay Real Estate.
Theodros Amdeberhan waa garyaqaan Itoobiyaan ah, waxa uuna sannadkii la soo dhaafay guri dabaq ah oo weyn ka dhexgatay kondo (guri) ka kooban saddex qol oo hurdo, waxa uuna ku gatay lacag dhan 3.5 milyan oo bir ah (oo u dhiganta $127,000). Theodros oo aad ugu faraxsan hoygiisa cusub waxa uu yiri, “hormariyayaasha dhismayaasha dalku ma fuliyaan ballantooda, waana mid mar kasta daahda, laakiin “markii Md. Wang uu ii soo jeediyey qiime macquul, isla markiiba waa la booday.” Dhismaha oo xarrigga laga jaray sannadkii 2016 hadda 70% waa la iibsaday.
Dhismuhu waa mid aan u ekayn kuwa Addis Ababa oo ka muuqaal duwan. Irridda hore ee laga soo galo dhismaha dabaqa waxaa ka lusha faynuuso gaduudan. Hareeraha waxaa taxan geedo u muqaal eg geedaha timirta. Waa 13 dabaq oo is dulsaaran oo markii indhahaagu ku dhacaan aad is leedahay meeshu ma magaaladii Shenzen ee Shiinahaa, mise waa Shanghai. Maya, ma aha Shiinaha ee waa sida ay hadda Addis noqotay.
Addis Ababa tii aad taqaanay ma aha. Gaariyaashu waxa ay dulmarayaan laami siman oo Shiinuhu dhisay. Qalabku dhismuhu waxa uu dul-heehaabayaa hawada sare ee saraha dhaadheer ee Addis Ababa. Sharqanta mashiinada harqaanka iyo makiinadaha sancadu waa kuwo guuxooda laga maqlo warshadaha Shiinuhu dhiseen ee ku dhexyaal dhulka shirkadaha Shiinaha la siiyey. Dalxiisayaasha Shiinuhu waxa ay ka soo dagaan gagidaha diyaaradaha ee hadda la cusbooneysiiyey, oo deedna isla gagidaas loo raaco ama laga raaco tareen cusub oo Shiinuhu dhiseen.
War yaan lagugu daalin e, magaalada Addis Ababa waxa ay noqonaysaa magaalo Shiinuhu dhisay. Laakiin farta dadka u taagan baa waxa ay tahay “qiime intee le’eg dhan dhaqaale iyo dhan dibloomaasiyad bay ku fadhidaa?”
Magaalo bilaa cinwaan ah
Addis Ababa waa magaalooyinka adduunka kuwa ugu jawi sarreeya, waxa ayna badda ka sarraysaa 2,355 mitir (meesha Bossaso ama Xamar ay badda la simanyihiin). Waxaa 2007 la qiyaasay in Addis ay ku noolyihiin dad tiradooda dhantahay 2.7 milyan. Laakiin taasi waa sannadkii 2007 oo hadda tiradu wax badan bay intaas ka badantahay. Waa yaryhiin dhismayaal leh cinwaan loogu soo hagaago, oo sida kaliya oo lagu heli karaa waa tilmaan oo kaliya. Addis sida magaalooyinka Yurub ma leh kaabayaal magaalo weyn, run ahaantiina sida ay noo sheegtay Alexandra Thorer oo ah engineer, Addis markeedii horeba looma dhisin, looma qorshayn in ay magaalo noqoto.
Qarnigigan 21aad, dadka Addis ku nool waa tiradhaafeen, jidadkeediina waa dhooqoobeen. Laakiin qorshaha Shiinuha iyo xiriirka dowladaha Afrika waxa uu ahaa mid soojireen ah, siina xoogeystay, waxaana sannadkii 2000 Beijing ka biloowday dhidibka Madasha Iskaashiga ee Shiinaha iyo Afrika.
Itoobiya oo ka faa’iideysanaysa madashaas waxa ay hormarkeeda ka dhex aragtay Shiinaha, waxa ayna u aragtay qaab ku habboon in loo raaco hab dhiska kaabayaasheeda.
A sign outlining the plan for Chinese constructed roads in Addis Ababa. Credit: Jenni Marsh/CNN (calaamad jidadka Shiinuhu ka dhisayo Addis Ababa)
Labaatankii sano ee la soo dhaafay Shiinuhu waxa ay Addis u dhiseen jid magaalada ku wareegsan, loona bixiyey kalagoyska Gotera, kuna kacay qiime dhan $12.7 milyan USD. Waxaa kale oo ay Itoobiya u dhiseen haayway ka kooban lix jid oo is feer socda, qiimuhuna yahay $800 milyan USD.
Intaas waxaa kale oo weheliya mashaariicda tareenada oo uu ugu horreeyo kan isku xira Itoobiya iyo Jabuuti oo asna ku kacay qiime dhan $4 bilyan USD. Waxaa weheliya tareen-magaalaha Addis Ababa kala gura, ahna kan kaliya ee ka jira Afrikada Madow. Waa tareen saacaddii qaadi kara rakaab kor u dhaafaya 30,000, qofkiibana uu ku raacayo 6 bir (oo u dhiganta $0.30 USD ama wax aad ugu yar nus doolar).
Intaas waa dhowr mashruuc oo kaliya oo Shiinuhu ka dhiseen Itoobiya.
Runtii magaalada Addis waa ay isbadashay oo waaba magaalo cusub. Dabaqyada samada heehaabayaa waxa ay badaleen sawirkii magaalada oo dhan. Dhisme dhan 46 dabaq oo wada muraayad ah, ahaan doonana kan Itoobiya ugu dheer asna waxaa gacanta laga qaadayaa sannadka 2020, waxaana dhisaya shirkadda dowliga ah ee China State Construction Engineering Corporation.
The Chinese-built African Union in Addis Ababa, Ethiopia, in August 2018. Credit: Jenni Marsh/CNN (Xarunta Ururka Midowga Afrika ee Addis Ababa)
Waxaas oo dhisme ah oo Addis ku yaal, kan ugu caansan waa dhismaha cajiibka ah ee xarunta u ah Ururka Midowga Afrika. Waa dhisme Shiinuhu uu Addis hadiyad ahaan u siiyey sannadkii 2012, waxa uuna ku fadhiyaa qiime dhan $200 milyan USD. Ma jiro dhisme lamid ah oo Itoobiya ku yaal. Laakiin mid baa hubaal ah sida ay tiri Janet Faith oo ka shaqaysa xafiiska warfaafinta ee Ururka Midowga Afrika, ayada oo tiri, “markii hore ma ogeyn in dhismuhu leeyahay sansaan Shiine illaa aan Shiinaha tagay. Mise waaba Shiineys.”
Sannadkii 2000 markii ay badatay hadalhaynta daymaha reer Galbeedka ee Afrika, kuwaas oo kharashkoodu saddex jibbaar ka badnaa qoondada daryeelka caafimaadka dowladaha Afrika, waxa ay dowladaha reer Galbeedku Afrika ka cafiyeen deyn dhan $55 bilyan USD. Waxa ay ahayd taariikh aan hore loo soo marin.
Toban sano kabacdi, sida laga soo xigtay Johns Hopkins SAIS China-Africa Research Initiative Shinuhu waxa uu qaaradda Afrika ku leeyahay deyn dhan $130 bilyan USD. Lacagtaas badankeeda waxaa loo isticmaalay mashaariic hormarin oo ay ugu horreeyaan jidadka, xoogga korontada iyo mashaariicda macdanta.
Taasi iskama ay dhicin ee sabab baa keentay. Dhanka kaabayaasha dhaqaalaha, ha ahaato korontada, jidadka iyo tareenada, Afrika waa ay ka danbaysaa dunida inteeda kale. Saas oo ay tahayna kambaniyaasha reer Galbeedka, siiba bangiyadooda, sida IMF ama World Bank ma ay bixiyaan wax dhaqaale ah oo lagu dhiso kaabayaasha dhaqaalaha Afrika. Waana sababta booskaas uu maanta Shiinaha ugu xiranyahay.
Saas oo ay tahay reer Galbeedku waxa uu weli Afrika la dabataaganyahay canaan ah in aysan aqbalin deymaha Shiinaha, ayaga oo sabab uga dhigaya in ay xorriyadooda ku waayayaan, deedna saas hormar dhaqaale ku waayi doonaan.
Itoobiya waxa ay illaa sannadkii 2000 Shiinaha ka amaahatay lacag dhan $12.1 bilyan USD. Saas oo ay tahay deymaha Carabta iyo kuwa reer Galbeedka ee Itoobiya ay amaahatay way ka badanyihiin tan Shiinaha. Afrikada kale ayana waa saas oo kale.
Warbixin ay bishaan qortay hay’adda Johns Hopkins SAIS China-Africa Research Initiative waxaa lagu caddeeyey in deymaha Shiinuhu aysan hadda Afrika dhib ku hayn, aysanna qayb ka ahayn dhibaha dhaqaale ee ka taagan qaaradda Afrika.
Sawaxanka Reer Galbeedka
Si loo fahmo qaylodhaanta reer Galbeedka, siiba Mareykanka, ee ku aaddan deymaha sii kordhaya ee Shiinuhu u fidiyo Afrika waa muhiim in la fahmo tartanka u dhexeeya quwadaha maanta isku haysta dunida inteeda kale.
Solange Chaterland waa aqoonyahan, ahna bare iyo baare Jaamacadda Beljim ee Université Libre de Bruxelles. Asaga oo isbarbardhigaya quwadaha adduunka waxa uu yiri, “dunida maanta waa mid ku sii tallaabaysa adduun uu Shiinuhu hormuud u yahay. Sidaas darteed quwadihii hore u jiri jiray waxa ay wajiga siin la’yihiin liica maanta haysta, waxa ayna aad u dhibsanayaan awoodda quwadda cusub ee soo baxday.”
Saas oo ay tahayna, wali far baa ka taagan deynta Shiinaha ee Afrika. Lina Benebdallah waa kalkaaliye barafasoor siyaasadda iyo ammuuraha caalamka ee Jaamacadda Wake Forest University ee gobolka Mereykanka ee North Carolina, waxa ayna ka digaysaa isu dheelitir la’aanta xiriirka ganacsi ee Shiinaha iyo Afrika, ayada oo Shiinuhu u dhoofiyey Afrika ganacsi qiimihiisu yahay $88 bilyan USD, meesha Shiinuhu Afrika ka soo dhoofiyey ganacsi ku qiimaysan $40 bilyan USD.
Dhanka dalalka u deymaysan Shiinaha waxaa kamid ah Djibouti oo Shiinuhu leeyahay 77% deynta dalka oo dhan, waana mid kamid siddeed dal oo Shiinaha u deymaysan, ayna kamid yihiin Sri Lanka, Tajikistan iyo Bakistan.
Armaa Itoobiya Gacanta la Maroojiyaa?
Baqdinta laga qabo deymaha waxaa kamid ah Shiinaha oo laga baqayo in uu deynta siyaasadeeyo, taas oo macnaheedu yahay in Shiinuhu uu dalalka deynta bixin waaya ku khasbi doono wax aan dan u ahayn.
Saas oo ay tahay, Arkebe Oqubay, oo ah masuul sare oo dowladda Itoobiya, kana markhaati kacaya in aysan gacmo maroojin jirin, waxa uu yiri, “waxyaalaha aan ku rabno deynta Shiinaha waxaa kamid ah, aadna noo raalligalisay, Shiinaha oo aan marnaba faraha la soo galin siyaasadda gudaha ee dalka.”
Government minister Arkebe Oqubaby at the prime minister’s office in Addis Ababa, Ethiopia. Credit: Jenni Marsh/CNN
Tuhunka reer Galbeedka
Markii reer Galbeedku arkaan magaalo sida Addis Ababa oo kale ah oo lacagta Shiinuhu buuxdhaaf tahay, waxa ay la soo boodaan hadalhayska “Shiinuhu dan buu leeyahay,” bay tiri Benebdallah. Laakiin xaqiiqadu saas waa ka duwantahay, oo shirkadaha Shiinaha maba jiraan reer Galbeed kula tartama heshiisyada dhismaha, ha ahaato kuwa kaabayaasha dhaqaalaha ama heshiisyo kale. Markii shirkadaha Shiinuhu ay qalabkooda keensadaan wax walba waa isugu dhanyihiin, inta kalena waa raadso oo hawsha qabo.
Intaas kaliya ma aha ee markii Shiinuhu ay dhisayaan jidad, tareeno, iyo biyo-xireeno korontada dhaliya, waxa ay dhinac ka dhisayaan shirkadihii Shiinaha oo waxa ay wax ku dhisayaan shamiitadii iyo birihii Shiinaha laga keenay, ayna leeyihiin shirkado Shiinays ahi. Waa saas sida Shiinuhu ku bartay nidaamka adduunka iyo sida xargaha la isugu xiro.
Nolosha maanta ee Addis
The Poli Lotus complex / Inside an apartment / Credits: Jenni Marsh/CNN. Jenni Marsh/CNN
Hadda markii aad tagto dhismaha dabaqa dheer ee Poli Lotus ee Shiinuhu ka dhisay Addis Ababa, waxa aad arkaysaa wiilkii sharciyaqaan Theodros Amdeberhan oo talafishinka ballaca ballaaran ku ciyaaraya cayaarta fiidiyaha ee FIFA, asaga oo ku fadhiya fadhi qurxoon, darbigana u suranyahay sawir Paris iyo Eiffel Towe, dhanka kalena booyiso ugu karinayso kafee Itoobiyaan. Waxa uu yiri sida Shiinaha oo kale dhisme walba wax walba oo nolosha looga baahanyahay waa u dhanyihiin, waana ka raysannay buuqi, boorkii iyo Addis-tii bilaa qorshaha lagu dhisay. Wax la heli karo ma aha buu yiri.
*** Fadlan nala qaybso fikirkaaga iyo fiiradaada oo faham heerka deymaha, iskuna miisaan waxqabadka Shiinaha ee Afrika iyo kan reer Galbeedka ***
Xigasho CNN: Dabaqyo, tareeno iyo jidad: Addis Ababa oo u ekaatay magaalo Shiine (sawirro)
Siyaasadda & Dhaqaalaha 478 Wararka 20343
German Mission to Somalia: Germany funded Garoowe – Galkayo highway corridor funding TERMINATED
Waxgarad ku baaqay joojinta colaadda gobalka Sool ka soo cusboonaatay (dhegayso)